सामाजिक सञ्जालमा प्रियंका कार्कीका हट तस्वीर (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सामाजिक सञ्जालमा प्रियंका कार्कीका हट तस्वीर (फोटोफिचर)
काठमाडौ । प्रविधिको विकासले मानिसलाई संसारको जुन सुकै कुनामा भएपनि नजिक बनाएको छ । फेसबुक, टुईटर, इस्टाग्राम, भाइवर जस्ता सामाजिक सञ्जाल लामो समय सम्म बेखबर रहेका आफन्त तथा साथीसँग जोडिने सजिलो माध्यम बन्न थालेको छ । त्यहिे सामाजिक सञ्जालले मानिस संसारको जुन सुकै कुनामा भए पनि एउटै परिवार जस्तो नजिक बनाएको छ ।
प्रविधिका कारण हामि जो जहाँ जतिबेला पनि सजिलै कुराकानी गर्न र आफ्नो भावना साटासाट गर्न सजिलो भएको छ । पछिल्लो समय महिला, पुरुष, बालबालिका, युवा सबै उमेर समुहका नेपालीहरुले पनि प्रविधिको राम्रो प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यस कारण पनि सामाजिक सञ्जाल जीवनको अभिन्न अंग जस्तै भएको हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको वालमा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले पोष्ट गरेका यी सुन्दर तस्विरहरु ।